Youtube ချစ်သူများ အတွက် မသိမဖြစ် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာဆွေးနွေးချက်များ » Internet နှင့်ဆိုင်ရာများ » Websites များနှင့်ပတ်သက်၍
Youtube ချစ်သူများ အတွက် မသိမဖြစ်
စာမရေးဖြစ်တာ နဲနဲ ကြာသွားတယ် - ကျွန်တော် အားလုံး အတွက် အသုံးဝင်မယ့် အကြောင်းအရာလေး တစ်ခု အသေးစိတ် ရေးနိုင်ဖို့ စာနည်းနည်း လိုက်ဖတ်နေတာနဲ့ အချိန်ကြာသွားတာပါ - ကျွန်တော် လေ့လာခဲ့တာလေးတွေကို ခု အားလုံး စုပေါင်းပြီး ဖောက်သည်ချပါတော့မယ်။
ကျွန်တော် အင်တာနက် စသုံးခဲ့စတုန်းက Online video sharing တွေ အကြောင်း သိပ်မသိခဲ့သေးသလို သူ့ အသုံးဝင်ပုံတွေ အကြောင်းလည်း ကောင်းကောင်း နားမလည်ခဲ့သေးပါဘူး - အဲ့တုန်းက ကျွန်တော်နားလည်တာ ကိုယ်နားထောင်ချင်တဲ့ သီချင်းရှိရင် အင်တာနက်ထဲ ပြူးပြူးပြဲပြဲ လိုက်ရှာမယ် - ရှာမတွေ့ရင် သိတဲ့ မိတ်ဆွေ - သူငယ်ချင်းတွေဆီ အပူကပ် အကူအညီတောင်းမယ် - နောက်ပိုင်း နည်းနည်း ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်သိလာတော့ တတ်နိုင်သူတွေကို Upload တင်ခိုင်းမယ် အဲလိုတွေပဲ စဉ်းစားခဲ့တယ်။ Online video sharing ဆိုတာ ခုမှသာ ကျွန်တော်က ရေးကြီးခွန်ကျယ် လုပ်ပြောနေတာ တကယ်တော့ နားလည်သူ တစ်ယောက်အတွက်ဆို ဟာသတစ်ခုတောင် ဖြစ်နေမလားပဲ - တကယ်တော့ ဘယ် အသိပညာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဲ့ ပညာရပ်ဟာ သိတဲ့ သူအတွက် ကလေးကစားစရာ ဖြစ်သွားပေမယ့် လုံးဝနားမလည်သူ အတွက်တော့ မျှဝေမယ့်သူ မရှိရင် "0" အဆင့်ကနေ တက်ဖို့ကို တော်တော်ခဲယဉ်းပါတယ်။ တစ်ချို့က စိတ်ဝင်စားတယ် ဒါပေမယ့် အင်တာနက်က လက်တစ်ကမ်းမှာ မရှိဘူး - တစ်ချို့က လက်တစ်ကမ်းမှာ ရှိတယ် - ဒါပေမယ့် လူမအားဘူး - စသဖြင့် အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းမျိုးစုံနဲ့ လည်ပတ်နေကြတဲ့ လူမှု ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျွန်တော်တို့တွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တာဝန်ကျေကြဖို့ လိုပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မင်းဘာလုပ်နိုင်လဲ ငါ ဘာလုပ်နိုင်လဲ ဆိုတာ ပြိုင်နေတာမျိုးထက် တစ်ခြားသူ တစ်ယောက်အတွက် ငါ ဘယ်လောက် အသုံးဝင်ခဲ့ပြီလဲ ဆိုတာကို ပိုင်းဖြတ်နိုင်ဖို့က လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးမှာ ပိုပြီး အရေးပါပါတယ်။
ခု မျက်မှောက်ခေတ်မှာ Online video sharing ဆိုတာ အရမ်းကို ကျယ်ပြန့်လာပြီ - တစ်ခုခု ကို ဝေမျှချင်ပြီ ဆိုရင် တော်ယုံ စာရိုက်ပြီး တစ်ဆင့်ချင်း ရှင်းပြတာမျိုးတောင် ဘယ်သူမှ သိပ်မလုပ်ကြတော့ဘူး - ဖျော်ဖြေရေး ကဏ္ဍကနေစလို့ - ပညာရေး - နည်းပညာ - သတင်း - လူမှုဘဝ အားလုံးကို Online video sharing sites တွေမှာ စက္ကန့်နဲ့ အမျှ အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ တင်ပြီး ဝေမျှ နေကြပါပြီ - ကမ္ဘာပေါ်က ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေလဲ - ဒါကို ကျွန်တော်တို့ သတင်းစာလှန်ဖတ်ပြီး သိနေယုံလောက်နဲ့ ရောင့်ရဲနေရင် တကယ်တမ်း နောက်မှာပြတ်ကျန်ခဲ့မှာ ကျွန်တော်တို့ပဲ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါတင်မက တစ်ချို့ နည်းပညာနဲ့ ဆိုင်တာတွေ ဆိုရင်လည်း စာနဲ့ ဖတ်ရင် ၁ နာရီလောက် ဖတ်ရင်တောင် မျက်စိထဲ မမြင်နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာမျိုးတွေက Online video sharing sites တွေမှာ ရှိတဲ့ လက်တွေ့သရုပ်ပြ ဗွီဒီယိုတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း နားလည်သွားနိုင်တာမျိုးတွေလည်း ရှိလာပါပြီ - ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေ Online video sharing sites တွေကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချတတ်ဖို့နဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ ပြည့်စုံအောင် ဘယ်လို ဖန်တီးနိုင်မလဲ ဆိုတာ ဒီနေရာမှာ တစ်ပိုင်းချင်း တစ်ချက်ချင်း ဆွေးနွေးသွားပါမယ်။
Online video sharing လို့ ပြောလိုက်ရင် မျက်မှောက်ခေတ်မှာ Metacafe - Blip.tv - Youtube videos - Yahoo Videos စသဖြင့် လက်ညှိုးထိုးပြရမယ့် နေရာတွေ တော်တော်များများ ရှိပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာ ရှိနေတဲ့ သန်းနဲ့ ချီတဲ့ video clips တွေမှာ နည်းပညာနဲ့ ဆိုင်တာတွေ - သီချင်း albums တွေ - နောက် Movie trailers တွေ - သတင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ - ဗဟုသုတ ဝေမျှချက်တွေ စသဖြင့် ကဏ္ဍပေါင်း မြောက်များစွာ မရေမတွက်နိုင်အောင် ရှိနေပါတယ်။ ဒီလို ကဏ္ဍအသီးသီးက အကြောင်းအရာတွေကို Online viewing အနေနဲ့ Internet ရှိတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ တိုက်ရိုက်ကြည့်လို့ ရသလို - Internet မရနိုင်တဲ့ နေရာတွေ အတွက်ဆိုရင်လည်း Download ကြိုချထားပြီး နောက်ပိုင်းမှာ Offline viewing အနေနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အဲလို Offline viewing အတွက် ဖြစ်စေ - တစ်ခြား အကြောင်းတစ်ခုခု အတွက် ဖြစ်စေ downloaded ချထားပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ နေရာမှာ Video files တွေက ယေဘုယျအားဖြင့် FLV format ( Flash Video ) နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ FLV format ဆိုတာ Video compression အတွက် Adobe ကနေ ထုတ်ထားတဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်ပါ။ ဒီ Format က Online video လောကမှာ အရင် အသုံး ပြုခဲ့ကြတဲ့ Apple QuickTime, AVI, Windows Media နဲ့ Real rm formats ဆိုတာတွေရဲ့ နောက်မှာ တမဟုတ်ချင်း တရှိန်ထိုး လူသိများလာတဲ့ Web standard format တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် Flash Video ဆိုတာတွေက Web browsers တော်တော်များများ မှာ တွဲပါဝင်ပြီးသား ဖြစ်တဲ့ Macromedia Flash Players နဲ့ အသင့်တွဲ ကြည့်နိုင်တာကြောင့်ပါ။
ကျွန်တော်တို့တွေ Google Videos တို့ Youtube videos တို့ကို ဘယ်လို Download ချလို့ ရမယ် ဆိုတာတော့ တော်တော်များများ သိပြီး ကြပါပြီ - တကယ်လို့ မသိခဲ့သေးဘူး ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော် အရင်က ရေးထားပြီးတဲ့ အင်တာနက် အတွင်း သီချင်းရှာဖွေခြင်း ဆိုတဲ့ အကြောင်းထဲမှာ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဖော်ပြထားပါတယ်။ လေ့လာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခု ကျွန်တော်တို့ ဆက်တွေးစရာ ရှိလာတာက Google Videos တို့ Youtube videos တို့ကို Downloaded ချလို့တော့ ပြီးသွားပြီ - ပြီးတော့ရော ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ ?? FLV video files တွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ ရသလား ?? စသဖြင့် သိထားသင့်တာတွေ တော်တော်များများ ရှိလာပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာသူ တော်တော်များများ လိုလားချက် အပြည့်နဲ့ သိချင်မယ့် ယေဘုယျ ကျတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဒီနေရာမှာ စုစည်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
မေးခွန်း အမှတ် ( ၁ ) - ကျွန်တော် Youtube - Google Videos နဲ့ Metacafe က Videos ဖိုင်တွေကို ဘယ်လို Download ရယူနိုင်ပါမလဲ ??
Video sharing sites တွေက ကျွန်တော်တို့ သိထားပြီးသလို သီချင်းတွေ - Video တွေ - သတင်းတွေသာ အလကား ကြည့်ခွင့် ပေးတာ - သူတို့ဆိုဒ်ကနေ အလွယ်တကူ ဒေါင်းလုပ်ချဖို့ ကိုတော့ လျောလျောရှုရှုနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ဖန်တီးပေးမထားပါဘူး - အခုနောက်ပိုင်းတော့ Youtube တို့ - တစ်ခြား Video sharing sites တွေက IDM ( Internet Download Manager ) တင်ထားလိုက်ရင် တော်တော်များများ အဆင်ပြေပြေ ချလို့ ရနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ IDM သုံးဖို့အဆင်မပြေသူ - သုံးနေရင်း Update ပေးမိလို့ ဖြစ်စေ - တစ်ခြား အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ခဏခဏ Error တက်သူတွေ အတွက် IDM မလိုပဲ Download ချလို့ ရမယ့် နည်းလမ်းပေါင်း မြောက်များစွာထဲက နောက်ထပ် လွယ်ကူ အဆင်ပြေနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ( ၂ ) ခု ကို ဖော်ပြပေး ပါ့မယ်။
နည်းလမ်း ( ၁ ) : Youtube အပါအဝင် တစ်ခြား Youtube လိုမျိုး Video sharing sites တွေက ကိုယ်လိုချင် သိမ်းထားချင်တဲ့ Videos တွေကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်ဖို့ ကျွန်တော် သဘောအကျဆုံး Add-ons တစ်ခု ကတော့ Video Download helper ပါ -
ဒီ Add-ons ကို Install လုပ်ပြီး Video sharing sites တစ်ခုခု ဥပမာ ( Youtube ) ကနေ သီချင်း တစ်ပုဒ် ဖွင့်လိုက်တယ် ဆိုကြပါစို့ - ဒီလိုဆို အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း တင်ထားတဲ့ Videos မှာ Quality အမျိုးမျိုးရှိရင် Quality အမျိုးမျိုးနဲ့ Download ချလို့ ရအောင် ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့က အဲ့ထဲက နှစ်သက်ရာ တစ်ခုကို Click ပေးပြီး စက်ထဲက နေရာတစ်ခုမှ သိမ်းလိုက်ယုံပါပဲ -
Video Download helper လိုပဲ တစ်ခြား Download ချရာမှာ လွယ်ကူအောင် ကူညီပေးနိုင်တဲ့ Easy Youtube video downloader - 1-Click YouTube Video Download နဲ့ တစ်ခြား အသုံးဝင် Add-ons အများအပြားလည်း ကျန်ရှိနေပါသေး တယ်။ ဒီနေရာမှာ သွားရောက် လေ့လာကြည့်ပြီး နှစ်သက်သလို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
နည်းလမ်း ( ၂ ) - နောက်ထပ် အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်း တစ်ခုက ကိုယ်သိမ်းထားချင်တဲ့ Video ရဲ့ URL ကို Copy ကူးပြီး KeepVid Lite မှာ paste လုပ်ပြီး Download ချခြင်း အားဖြင့်လည်း ဘာ Add-ons မှ install လုပ်ဖို့ မလိုပဲ သိမ်းဆည်းထားနိုင် ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းလမ်းဟာ ကိုယ့်စက်ထဲမှာ Java install လုပ်ဆောင်ထားပြီးသား ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အကယ်၍ Error တစ်ခုခု ပြခဲ့ရင် Free Java Download ကို ဒီနေရာမှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
မေးခွန်း အမှတ် ( ၂ ) - ကျွန်တော်က Youtube မှာ သဘောကျတဲ့ Video clips လေးတွေ တွေ့ရင် နှစ်ခါ စဉ်းစား မနေဘူး Download ချပစ်လိုက်တာပဲ - ဒါပေမယ့် ခုတော့ Download ချထားတာတွေ များပြီး ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ Video clip ကို ပြန်ကြည့်ရဖို့ စက်ထဲမှာ တော်တော်ကြီး ပြန်ရှာရှာနေရတယ်။ အဲတာ Youtube ကနေ Download ချထားတဲ့ FLV Video files တွေကို နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ကြည့်ချင်လို့ ရှာဖွေတဲ့ အခါ လွယ်ကူအောင် ဘယ်လို သိမ်းဆည်းထားလို့ ရနိုင်မလဲ ??
သီချင်းရှာနည်းကိုလည်း သိပြီ - Download ဘယ်လို ချရမယ် ဆိုတာကိုလည်း နားလည်ပြီ ဒီလိုဆိုရင် သိပ်မကြာခင်မှာ Dwonload ချရင်း ချရင်းနဲ့ ကိုယ့်စက်ထဲမှာ စုထားဆောင်ထားတဲ့ FLV files တွေရဲ့ ပမာဏက ကြောက်မခန်းလိလိ ကြီးထွားလာပါလိမ့်မယ်။ အဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ပြဿနာ တက်လေ့ရှိတာက Download တွေ အရမ်းကာရော စွတ်ချပြီး နောက်ဆုံး တကယ်တမ်း ဇာတ်ကားတစ်ကားကား ဖြစ်စေ - သီချင်းတစ်ပုဒ်ပုဒ် ဖြစ်စေ ပြန်ကြည့်ချင်တဲ့ အခါမှာ ပမာဏ များပြားလွန်းတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ FLV files တွေကြောင့် ကိုယ်ကြည့်ချင်ရာကို အလွယ်တကူ ပြန်ရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ အခက်အခဲပါ - ဒါ့အပြင် မကောင်းတဲ့ တစ်ချက်က FLV files တွေဟာ Picasa တို့ Apple iTunes တို့လိုမျိုး Media gallery software တွေနဲ့ index လုပ်လို့လည်း မရသလို Search လုပ်လို့လည်း မရပါဘူး - ဒါ့ကြောင့် FLV ဖိုင်တစ်ခုကို တွေ့လိုက်တာနဲ့ ဒီဖိုင်က ဘာအကြောင်းကို ဖော်ပြတာလဲ ဆိုတာ လူပြိန်းတစ်ယောက် တွေ့ရင်တောင် မြင်သာ သိလွယ်အောင် အဆင်ပြေစေမယ့် နည်းလမ်းမျိုး ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီလို လုပ်ဆောင်ဖို့ ဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Video clip ကို Download ချပြီး ကတည်းက သူ့ နာမည်ကို မြင်သာ သိလွယ်အောင် ပြောင်းလဲ လိုက်ပါ။ ဆိုကြပါစို့ ကျွန်တော်တို့ Youtube မှာ ရှိတဲ့ 2009 ခုနှစ် စာပေဟောပြောပွဲက ဆရာချစ်ဦးညို ဟောပြောတဲ့ ဖိုင် ပထမပိုင်း ကို Download ချလိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ စက်ထဲမှာ ၁၅ မိနစ် ၀၁ စက္ကန့် ကြာတဲ့ FLV file က ခုလို Singapore 2009 - Literary Talk - Part 14a- Chit Oo Nyo ဆိုတဲ့ file name နဲ့ ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို file name မျိုးကို ဘာမှ မပြုပြင် မပြောင်းလဲပဲ သိမ်းမယ့် အစား ၅ စက္ကန့်လောက် အချိန်ပေးပြီး Chit Oo Nyo_Literary Talk 1 ဆိုတာမျိုး ဖြစ်စေ Chit Oo Nyo_Talk 1 ဆိုတာမျိုး ဖြစ်စေ ပြောင်းသိမ်းလိုက်ပါ။ ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသိမ်းဆည်းထားတဲ့ files မျိုးတွေက X1 - Filehand - Copernic Desktop Search စတဲ့ Desktop search programs မျိုး အသုံးပြုသူတွေအတွက် အလွယ်တကူ ရှာဖွေဖို့ ပိုမို လွယ်ကူစေ ပါတယ်။
မေးခွန်း အမှတ် ( ၃ ) - ကျွန်တော် Youtube ကနေ Download ချထားတဲ့ FLV files တွေက ကျွန်တော့် ကွန်ပြူတာမှာ ကြည့်လို့ မရဘူး - ကျွန်တော့်စက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ Windows Media Player တို့ Winamp တို့ iTunes တို့နဲ့ ဖွင့်တော့လည်း မပွင့်ဘူး - ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ??
ဟိုအရင် တစ်ချိန်ကတော့ ဒီပြဿနာက တော်တော်လေး ဂယက်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ FLV files တွေကို ဘာနဲ့ ဖွင့်ရမယ် ဆိုတာ တော်တော်များများလည်း သိထားကြပြီးသလို FLV files ကို ဖွင့်နိုင်တဲ့ အသုံးပြုနေကျ Players တစ်ခုစီလည်း လူတိုင်းမှာ ရှိနေကြလောက်ပါပြီ - ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ လိုအပ်သူတွေ သိရှိနိုင်အောင် ပြန်လည်ဖော်ပြရရင် အရင်တစ်ချိန်က FLV files တွေ ဆိုတာ FLV players နဲ့ ဖွင့်မှ ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ FLV Player တို့ Riva FLV player တို့ ဆိုတဲ့ Player လိုမျိုးပေါ့ - ဒါပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျွန်တော် သဘောအကျမိဆုံး Player က VLC media player ပါ - သူက FLV players တွေလိုမျိုးပဲ FLV files တွေကို ဖွင့်လို့ ရသလို တစ်ခြား ဘယ် formats တွေကို Support ပေးသေးတယ် ဆိုတာလည်း ဒီနေရာကနေ သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
မေးခွန်း အမှတ် ( ၄ ) - ကျွန်တော် ဟိုတစ်နေ့က ဆွေးနွေးပွဲလေး တစ်ခု Youtube မှာ တွေ့လို့ Download ချထားလိုက်တယ် - အဲ့ဒီ့ Video clip က မိနစ် ၃၀ ကျော်ကျော်လောက်တော့ ကြာတယ်ဗျ - ဒါပေမယ့် အဲ့ထဲမှာ ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားတဲ့ အပိုင်းက ၁၀ မိနစ်ကျော်ကျော် လောက်ပဲ ပါတယ်။ အဲ့တာ FLV file ထဲကနေ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် အပိုင်းလေး ဖြတ်ထုတ်ပြီး Video clip တစ်ခု အသစ် လုပ်လို့ ရနိုင်မလား ??
ဒီလို ပြဿနာ မျိုးက Youtube သမားတိုင်း ဖြစ်နေကြတာပါ - ဒီ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ မနည်းမနော ရှိပေမယ့် Free ရပြီး အသုံးပြုဖို့ သင့်တော်မယ့် Tools တွေကို ဦးစားပေး ဖော်ပြသွားပါ့မယ်။ အဲတာကတော့ FLV files အကြီးစားတွေထဲက ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အပိုင်းလေးလောက်ကို ဖြတ်တောက်ရယူနိုင်ဖို့ အတွက်ဆို free ရတဲ့ FLV Parser သုံးဖို့ပါ - အသုံးပြုနည်းကို ဒီနေရာမှာ ရေးထားတာ ရှိပါတယ်။ FLV Parser ဟာ Free ရတဲ့ Tool တစ်ခု ဖြစ်တာ မှန်ပေမယ့် Command-line tool တစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့် Command-line ကို အသုံးမပြုချင်သူ - စိတ်မဝင်စားသူ တစ်ယောက် အတွက် သုံးဖို့ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး - အဲ့လို Command line ကို အသုံးမပြုချင်သူတွေ အတွက် Moyea FLV Editor Lite ဆိုတာ ရှိနေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အသုံးပြုနည်းကို ဒီနေရာမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ နောက် Option တစ်ခုကတော့ Free မရတဲ့ Ultra Video Splitter ကို key ထည့်သုံးတဲ့နည်းပါ - Ultra Video Splitter 6.0.0919 + key ကို ဖော်ပြပါ နေရာကနေ သွားရောက် ရယူ နိုင်ပါတယ်။
မေးခွန်း အမှတ် ( ၅ ) - ကျွန်တော့် စက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ FLV videos တွေကို SWF တို့ နောက် တစ်ခြား AVI တို့ စတဲ့ Formats တွေကို ဘယ်လိုများ ပြောင်းယူလို့ ရနိုင်မလဲ ??
ဒီလို formats တွေ ပြောင်းယူဖို့ စဉ်းစားကြတဲ့ နေရာမှာ အင်တာနက်ထဲကို လိုက်ရှာကြည့်ရင် Free ပေးထားတာတွေ - Free မပေးပဲ ပိုက်ဆံနဲ့ ဝယ်သုံးရတာတွေ တော်တော်များများ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးထဲမှာ Free ရပြီး အသုံးပြုသင့်တဲ့ Software တစ်ခုကကတော့ SUPER © Simplified Universal Player Encoder & Renderer Software ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို အသုံးပြုပြီး FLV files တွေကို တစ်ခြား formats တွေ ဖြစ်တဲ့ MP4, MOV H.264, AVI, ASF နောက် Flash SWF animations ဆိုတာတွေထိ ပြောင်းယူလို့ ရပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ Free ထက် Crack တွေ - keys လေးတွေနဲ့ သုံးရတဲ့ Software မျိုးတွေ ပိုပြီး လိုလားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို လူမျိုးများ အတွက်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဖိုရမ်မှာ ပြင်ဆင်ထားပြီးသား ဖြစ်တဲ့ Convector များမာတိကာ ဆိုတဲ့ နေရာမှာ လိုအပ်တာတွေကို အားကိုးရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
မေးခွန်း အမှတ် ( ၆ ) - ကျွန်တော့် စက်ထဲက AVI MPEG MOV 3GP ... စတဲ့ Formats မျိုးစုံနဲ့ Movie clips aတွကို FLV format ဆီ ပြောင်းလို့များ ရနိုင်မလား ??
ဒီမေးခွန်းကို မေးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဆက်စပ်ပြီး တွေးစရာ ရှိလာတာ - နဂိုရှိပြီးသား Format တစ်ခုကနေ FLV format ကို ဘာကြောင့်များ ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားချင်ကြတာလဲ ?? ဒါက သိထားဖို့ လိုလာပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုရင် FLV တွေဟာ Adobe® Flash® Player plugin ရှိနေတဲ့ ဘယ် Browser မှာ မဆို အရွယ်တကူ ကြည့်ရှုနိုင်တယ်။ နောက် FLV format ဟာ Windows®, Macintosh®, or Linux® စတဲ့ ဘယ် OS မှာ မဆို ကြည့်ရှုနိုင်မယ်။ နောက် FLV format တွေက တစ်ခြား Video Formats တွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် အရွယ်အစား သေးငယ်တယ်။ Compression အရမ်းများလို့ အရွယ်အစား ငယ်သွားပေမယ့် လည်း Quality က အရမ်းကြီး ကျမသွားဘူး - နောက်ပြီး Internet speed လေးတဲ့ နေရာတွေကနေ ကြည့်မယ် ဆိုရင်တောင် FLV files တွေဟာ တော်ယုံ ပုံမှန် အနေအထားနဲ့ ကြည့်လို့ ရမယ် - စတဲ့ အားသာချက်တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် AVI MPEG MOV 3GP စတဲ့ formats တွေကနေ FLV format ကို ပြောင်းချင်မယ် ဆိုရင် Free ရတဲ့ Riva FLV encoder ကို အသုံးပြု လို့ ရသလို Free မရတဲ့ Software ကိုမှ Key ဖြစ်ဖြစ် Crack ဖြစ်ဖြစ် ရှာဖွေ အသုံးပြုချင်သူတွေ အတွက် ဆိုရင်လည်း Xilisoft Video Converter Ultimate တစ်ခုတည်းနဲ့တင် လိုအပ်ချက် အားလုံး ပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။ အပြောင်းအလဲ အနေနဲ့ သုံးကြည့်ချင်မယ် ဆိုရင် Xilisoft လိုပဲ သုံးလို့ ကောင်းတဲ့ Total Video Converter ကိုလည်း သုံးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
မေးခွန်း အမှတ် ( ၇ ) - ကျွန်တော့်မှာ Youtube ကနေ Download ချထားတဲ့ Size သေးသေး FLV Video clips တွေ ရှိပါတယ်။ အဲတာတွေထဲက အဆက်အစပ်ရှိတာ တွေကို တစ်ခုတည်း ဖြစ်အောင် ပေါင်းလိုက်ချင်တယ် - ဘယ်လိုများ ကူညီနိုင်မလဲ မသိ ??
FLV files တွေကို ပေါင်းချင်တယ် ဆိုရင် Macromedia Flash Professional ကလွဲပြီး တစ်ခြား freeware တွေတော့ ကောင်းကောင်းကန်းကန်း မသိမထားမိသေးပါဘူး - ဒါပေမယ့်လည်း FLV Video files တွေကို ပေါင်းတဲ့နေရာမှာ နောက်တစ်မျိုး လုပ်ဆောင်နိုင်တာကတော့ နဂိုရှိနေပြီးသား FLV files တွေကို အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့ SUPER လိုမျိုး ဖြစ်စေ - တစ်ခြား Converter တစ်ခုခုနဲ့ ဖြစ်စေ AVI format ကို အရင်ဆုံး ပြောင်းပစ်ပြီး အဲ့နောက်မှာမှ ရလာတဲ့ AVI files တွေ အားလုံးကို free ရတဲ့ VirtualDub သုံးပြီး Single AVI file အနေနဲ့ ပေါင်းထုတ်ပစ်လို့ ရပါတယ်။ အဲ့လို ပေါင်းပြီးနောက်မှာမှ FLV ကို နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ပြောင်းရမှာပါ - ဒါကတော့ FLV Video ပေါင်းတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော် သိထားသလောက်ပါ - တကယ်လို့ Video မဟုတ်ပဲ MP3 တွေ တစ်ပုဒ်နဲ့ တစ်ပုဒ် ပေါင်းချင်တာမျိုး ဆိုရင်တော့ MergeMP3 - Meda MP3 Joiner စတဲ့ Software မျိုးသုံးပြီး MP3 ဖိုင်တွေကို ပေါင်းပစ်လို့ ရပါတယ်။
မေးခွန်း အမှတ် ( ၈ ) - ကျွန်တော် ဟိုတစ်နေ့ က ဝယ်လာတဲ့ iPod ထဲ Youtube က Download ချထားတာလေးတွေ ထည့်ပြီး ကြည့်ချင်လို့ ကူညီနိုင်ဦးမလား ??
ဒီ မေးခွန်း အတွက် အဖြေကတော့ အပေါ်က မေးခွန်းနံပါတ် ( ၆ ) မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အတိုင်း Format ပြောင်းသိမ်းပြီး ကိုယ့် iPod ထဲကို ထည့်လိုက်ပါ - လိုချင်တဲ့ အတိုင်း ကြည့်လို့ ရပါလိမ့်မယ်။
မေးခွန်း အမှတ် ( ၉ ) - ကျွန်တော့်မှာ ရှိတဲ့ သီချင်းတွေကို ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး Youtube မှာ တင်ဖို့ Video clips လေး တွေ လုပ်ချင်တယ်ဗျာ - Adobe Premiere တို့ Final Cut Pro တို့ Macromedia Flash တို့လိုမျိုး ဝယ်ရလောက်အောင် ထိလည်း ကျွန်တော့်မှာ မတတ်နိုင်ဘူး - အဲတာ ကျွန်တော့် အတွက် Free ဖန်တီးလို့ ရမယ့် တစ်ခြား နည်းလမ်းလေးများ မရှိနိုင်တော့ဘူးလား ??
ဒီအတွက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ စက်ထဲမှာ နဂိုတည်းက Function အစုံနဲ့ ထည့်ထားပေးပြီးသား Windows Movie Maker ဆိုတဲ့ Video Editing Applications တစ်ခု ရှိပါတယ်။ သူ့ကို သုံးပြီး Titiles တွေ ထည့်တာ - Transitions ပြောင်းတာ - Video effects ထည့်တာ ဆိုတာတွေကို ကိုယ့်ထည့်ချင်တဲ့ ပုံ - သီချင်းလေးတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး အလွယ်တကူ ဖန်တီးလို့ ရပါတယ်။ ဒီ အကြောင်းကိုပဲ Windows Live Movie Maker ၏ စွမ်းဆောင်ချက်အား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ဆိုပြီး ကျွန်တော် အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
မေးခွန်း အမှတ် ( ၁၀ ) - သူများ တစ်ကာတွေ Youtube မှာ ကိုယ်ပိုင် Channel လေးတွေ လုပ်ထားတာတွေ့တော့ ကျွန်တော်လည်း လိုက်လုပ်ထားမိတယ် - ဒါပေမယ့်ဗျာ - ကျွန်တော့် Channel ကို လူသိပ်မသိကြဘူး - အဲတာ ကျွန်တော့် Channel လေးကို လူသတိထားမိသွားအောင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Buttons လေးတွေ သုံးပြီး ကျွန်တော် ကြေငြာချင်တယ် - ဘယ်လိုများ လုပ်လို့ ရမလဲ ??
တကယ်လို့ buttons တွေ banner images တွေ သုံးပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားတဲ့ YouTube channel လေးကို တစ်ခြား သူတွေ သိအောင် ကြေငြာချင်တယ် ဆိုရင် ဒီစာမျက်နှာ ကိုသာ ရောက်အောင် သွားပြီး နှစ်သက်ရာ Design တစ်ခုခုကို ရွေးယူ လိုက်ပါ။
နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Youtube channel ကို Link ချိတ်တဲ့ နေရာမှာနည်းလမ်း နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။
( ၁ ) မိမိ Channel သို့ တိုက်ရိုက် Link ချိတ်ခြင်း – ဒီနည်းနဲ့ Link ချိတ်ထားရင် User တစ်ယောက်က ပုံပေါ် Click ပေးလိုက်တာနဲ့ ကိုယ့် Channel ရှိရာကို တိုက်ရိုက်ရောက်သွားပြီး ကိုယ်တင်ထားတဲ့ Videos တွေ - ကိုယ့်ရဲ့ Favorites တွေကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ကနေမှ တစ်ဆင့် ကိုယ့် Channel ကို subscribe လုပ်ချင်တယ် ဆိုရင် နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ “Subscribe” button ကို နှိပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ချိတ်ရမယ့် Link အနေအထားက အောက်ဖော်ပြပါ ပုံစံအတိုင်းပါ။
( ၂ ) မိမိ၏ Subscription page သို့ တိုက်ရိုက် Link ချိတ်ခြင်း – ဒီနည်းနဲ့ Link ချိတ်ထားရင် User တစ်ယောက်က ပုံပေါ်ကို Click ပေးလိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Channel ကို အရင်ရောက်မှာ မဟုတ်ပဲ ကိုယ့် Channel ကို Subscribe Page ကို အရင်ရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ စာမျက်နှာမှာ Confirmation button ကို Click ပေးလိုက်တာနဲ့ ကိုယ့် Channel ကို ဝင်ကြည့်စရာ မလိုပဲ တိုက်ရိုက် Subscribe လုပ်ပြီးသား ဖြစ်သွားမယ့် သဘောပါ။ ချိတ်ရမယ့် Link အနေအထားက အောက်ဖော်ပြပါ ပုံစံအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်း အမှတ် ( ၁၁ ) - Youtube မှာ Video clips တွေ ကြည့်ဖြစ်တဲ့ အခါ တစ်ခါ တစ်လေ Design က တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး တစ်ခါ တစ်လေကျတော့ တစ်ချို့ Video clips တွေက ဘာ Design မှန်း မသိဘူး - ခပ်လန်းလန်းလေး ဖြစ်နေတာ သတိထားမိတယ် - အဲတာ ဘာများ ကွာသွားလဲ မသိဘူး ?? အောက်မှာ ပြထားသလို ပုံစံကွာနေတာပါ -
အဲလို ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းက YouTube ကနေ ပြီး တစ်ခြား Web pages တစ်ခုခုပေါ်ကို သူ့ဆီက Videos တွေ Embed လုပ်တဲ့ နေရာမှာ default အနေနဲ့ Flash-based video player အဖြစ်နဲ့ Embed လုပ်နိုင်ဖို့ကိုပဲ Youtube က Default ပေးထားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာမှာ ရှိတဲ့ desktop based web browsers တွေက ပုံမှန် Adobe Flash Player plug-in သွင်းထားယုံနဲ့တင် YouTube videos ကို အဆင်ပြေပြေ ကြည့်နေနိုင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကွာသွားတဲ့ တစ်ချက်က Mobile web browsers နဲ့ Youtube Videos တွေကို ကြည့်တဲ့ အချိန်မှာ Mobile web browsers တော်တော်များများက Flash videos တွေကို Support မပေးပါဘူး -
အဲ့ဒီမှာမှ IFRAME based embed code နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ Youtube Videos တွေဟာ Mobile web browsers တွေမှာ ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေပြေ ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ အဲတာကြောင့် ကိုယ့်မှာ Blog တစ်ခုခု ရှိပြီး - ကိုယ့် Blog ကို Mobile web browsers နဲ့ ကြည့်ရှုသူတွေပါ ရှိတယ်ဆိုရင် Youtube Videos တွေတင်တဲ့အခါ ဖြစ်သင့်တာ Flash Embed တစ်မျိုးတည်းတင် မဟုတ်ပဲ - IFRAME Embed ကိုပါ အသုံးပြုပြီး နှစ်မျိုး တင်ပေးထားသင့်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ ပုံမှာ ဆိုရင် ရဲလေးနဲ့ Jenny ရဲ့ ငါ ဘာမှမသိ သီချင်းကို Flash Embed နဲ့ IFRAME Embed နှစ်ခုတွဲ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ခု ဖော်ပြခဲ့သလောက်ဆို Flash Embed နဲ့ IFRAME Embed နှစ်ခုရဲ့ ကွာခြားချက် တစ်ချို့နဲ့ အားသာချက် - အားနည်းချက် တစ်ချို့ကို နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
Last edited by KznT; 06-03-2011 at 02:05 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 50 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဦး, ကိုသဝေထိုး, ခင်မေခ, ခရေလေး, ချစ်သမီး, ဂတုံးလေး, ဆန်းမောင်, ညီညီသစ်, ညီဂျော်ကြီး, တီဘွား, တီး, နီထွန်းဦး, မွန်ကြီး, မှတ်ပုံတင်ရန်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟန်မိုးလွင်, ကျော်ကျော်မောင်, ဇေယျာအေး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, ငြိမ်းချမ်း, ဖြိုးလေး, နိုးတူး, arkaraung, Aung Aung, azp09, bonge, Emc Arkar, emo.loverlay, goldstar, hellboy, july20, ko lin, ko myo, kyaukphyu, kyawswarl, kyaww68, lu soe, Lwin Thu, minthike, minthumon, moonson, nanda, openeyes, thureinsoe, tu tu, victor10, wunna313, yawnathan, zo
ပြန်စာ - Youtube ချစ်သူများ အတွက် မသိမဖြစ်
မေးခွန်း အမှတ် ( ၁၂ ) - ကျွန်တော့် ဘလော့မှာ Youtube ကနေပြီး သီချင်းတို့ - တစ်ခြား နည်းပညာနဲ့ ဆိုင်တဲ့ Video clips တို့ တင်တဲ့ အခါ တစ်ပုဒ်ချင်းစီ - Video clips တစ်ခုချင်းစီကို embed လုပ်ပြီး တင်တင်နေရတာက ဘလော့မှာ နေရာပေးရတာ စာမျက်နှာလည်း ဖောင်းပွ သလို အလုပ်လည်း တော်တော်ရှုပ်တယ် - နောက်ထပ် နည်းလမ်းကောင်းလေးများ မရှိတော့ဘူးလား -
နည်းလမ်းကတော့ ရှိပါတယ် - ဒါပေမယ့် Youtube က Video clips တွေကို ကိုယ်ကြိုက်တာလေးတွေချည်းပဲ ရွေးပြီး Player တစ်ခုတည်းမှာ ပေါင်းချင်တဲ့ အခါ လုပ်ဆောင်ရမယ့် steps လေးတွေ နဲနဲ ပိုများပါတယ် - လုပ်ဆောင်ရမယ့် ပထမအဆင့် အနေနဲ့ Youtube ကို ဒီနေရာကနေ သွားပြီး Login ဝင်ရပါမယ်။ နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ ကိုယ်စုပြီး embed လုပ်ချင်တဲ့ Video clips တွေကို ရှာရပါမယ် - ဆိုကြပါစို့ ကျွန်တော်က Chan Chan သီချင်းတွေကို embed လုပ်ချင်တယ် - ဒီလို ဆိုရင် Chan Chan သီချင်းတွေထဲက ကိုယ်ကြိုက်ရာ သီချင်းတွေကို Youtube မှာ အရင်ရှာထားပြီး သီချင်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ +Add to ဘေးမှာ ရှိနေတဲ့ Down arrow ကနေ ဆင်းပြီး New playlist ကိုရွေးရပါမယ်။ ဒီလိုဆို နာမည်ဘယ်လို ပေးချင်လဲ ဆိုတာပေါ်လာပြီး Playlist ကို ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ နာမည်ပေးလိုက်ပါ။ ဥပမာ ကျွန်တော်ကတော့ ချမ်းချမ်းပေါ့ - အောက်မှာ ဖော်ပြထားတာကို ကြည့်ပါ - ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်က ချမ်းချမ်းကို Create လုပ်ထားပြီးသားပါ -
အဲလို New playlist ကို Create လုပ်ပြီးတာနဲ့ နောက်တစ်ဆင့်မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းတွေ ( or ) Video clips တွေ အားလုံးကို ကိုယ် Create လုပ်ထားတဲ့ Playlist အောက်ကို အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း တစ်ပုဒ်ချင်း ပေါင်းထည့်ပါမယ်။
အဲလိုနဲ့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းတွေ - Video clips တွေ အားလုံးပေါင်းထည့်ပြီးသွားပြီ ဆိုရင် အောက်မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ကိုယ့် အကောင့်ထဲက My Videos ကို ဝင်ပါ -
My Videos & Playlists ဆိုတဲ့ စာမျက်နှာပေါ်လာရင် အဲ့ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ကိုယ့် Playlist ကို ရှာပါ - ကျွန်တော်ကတော့ ချမ်းချမ်းပေါ့ -
အဲ့ကနေ Share ကို ဆက်ဝင်ပါ - အဲလို ဝင်လိုက်ရင် တစ်ခြားသူ တစ်ယောက်ဆီကိုယ့် Playlist ကို မျှဝေဖို့ Link လည်း ရှိနေသလို ကိုယ့် blog မှာ embed လုပ်ဖို့ copy / paste လုပ်ရမယ့် Embed code ကိုပါ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော် ဖန်တီးထားတဲ့ ချမ်းချမ်းသီချင်း ( ၁၁ ) ပုဒ် Playlist ကို ဒီနေရာမှာ သွားရောက် နားဆင်ခံစားနိုင်ပါတယ်။
Play all ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ Playlist ထဲမှာ ထည့်ထားပြီးသား သီချင်းတွေ အားလုံးကို အရင်တုန်းကလို Youtube မှာ တစ်ပုဒ်ချင်း လိုက်ရှာပြီး နားထောင်နေဖို့ မလိုတော့သလို - Playlist ထဲက နှစ်သက်ရာ သီချင်းတွေကိုလည်း ကျော်ခွ နားထောင်လို့ ရပါတယ်။
Last edited by KznT; 06-03-2011 at 02:12 PM..
ဆန်းမောင်, တီဘွား, နီထွန်းဦး, ကျော်ကျော်မောင်, ဇော်ရဲပိုင်, တောင်ကြီးသားလေး..., မောင်သံသရာ, ငြိမ်းချမ်း, aungphyo, bonge, emo.loverlay, hellboy, july20, ko myo, kyaukphyu, kyawminkhoung, kyawswarl, minthike, minthumon, thureinsoe, tu tu, zo
မေးခွန်း အမှတ် ( ၁၃ ) - YouTube က Video clip တစ်ခုထဲမှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ အပိုင်းလေး တစ်ပိုင်းပါလို့ တစ်ယောက်ယောက်ကို ကျွန်တော်က ကြည့်ဖို့ ဝေမျှချင်တဲ့အခါ Video clip ကြီး တစ်ခုလုံးပါတဲ့ Link ပေးပြီး ကြည့်ခိုင်းရတာမျိုးထက် ကြည့်စေချင်တဲ့ အပိုင်းလေးကနေပဲ ဖြတ်ပြီး သူကြည့်လို့ ရအောင်လုပ်လို့ မရဘူးလား - မဟုတ်ရင် သူ့မှာ ကျွန်တော် ကြည့်စေချင်တဲ့ အပိုင်းလေး ကြည့်ရဖို့ အရေး အဲ့အပိုင်း မရောက်မချင်း ပြနေမယ့် Video clip တစ်ခုလုံးပဲ ကြည့်ရတော့ မလိုလို - ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်က မိနစ်မှတ်ပြီး ဘယ်နမိနစ်ကို ကျော်ကြည့်လိုက်လေ - ဘာညာနဲ့ အပိုင်းလေး တစ်ခု ကြည့်ရဖို့ အရေး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အချိန်ညှိနေရမှာ အဆင်မပြေလှဘူး - အဲတာ နည်းလမ်းလေး သိရင် ဝေမျှပါဦး -
အဲ့အတွက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ နည်းလမ်းရှိပါတယ် - ကျွန်တော်တို့ ပုံမှန် Youtube ကြည့်နေကျ သူတွေ သိထားတဲ့ YouTube URLs တွေဆိုတာ သူ့ကို click ပေးလိုက်ရင် သက်ဆိုင်ရာ Video clip ရှိရာဆီကို ရောက်အောင် ခေါ်သွားပေးယုံကလွဲလို့ တစ်ခြား ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား မလုပ်ဆောင်ပါဘူး - တကယ်လို့ အပေါ်မှာ မေးထားသလို ကိုယ်ပြချင်တဲ့ Video clip ကိုလည်း ရောက်အောင် ခေါ်မယ် - ဒါတင်မက အဲ့ဒီ့ Video clip ကမှ ကိုယ်ကြည့်စေချင်တဲ့ အပိုင်းလေးကနေပဲ တစ်ဖက်က ကြည့်ရှုသူကို စပြချင်မယ် ဆိုရင် ပုံမှန် ကျွန်တော်တို့ သိထားတဲ့ YouTube URLs မှာ “time” parameter ကို ထည့်သွင်းပေးရပါမယ် - အဲလို လုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ထူးခြားသွားချက်က ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ link ကို တစ်ဖက်လူ click ပေးလိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ဝေမျှချင်တဲ့ Video clip ကို သူ ရောက်သွားတဲ့ အပြင် အဲ့ Video clip ထဲကမှ ကိုယ်စပြီး ကြည့်စေချင်မယ့် အပိုင်းဆီ သူက အလိုလျောက် ကျော်လွှားခေါ်ဆောင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် -
ဥပမာ ဆိုကြပါစို့ - ကျွန်တော် ချမ်းချမ်း ရဲ့ ရှိသည် ဖြစ်သည် ချစ်သည် ဆိုတဲ့ သီချင်းမှာ သီချင်းရဲ့ အစဟာ အချစ်စစ်တစ်ခုကို ရှာတွေ့ပြီ ကနေ စပေမယ့် ကျွန်တော်က အဲ့ဒီ့ အစပိုင်းကို မကြည့်စေချင်ပဲ ဒုတိယပိုင်း Intro ပြန်စဝင်တဲ့ မုန်းလို့မရအောင် ချစ်သွားပြီး ကနေ စပြီး ပဲ တစ်ဖက်လူကို ကြည့်စေချင်တယ် ဆိုပါစို့ -
ဒီလိုဆို အဲ့ဒီ့ သီချင်းရဲ့ မုန်းလို့မရအောင် ချစ်သွားပြီး ဆိုတဲ့ အစနေရာကို ကိုယ်အရင် ရောက်အောင်သွားပြီး Player က Pause ခလုတ်ကို နှိပ်ထားလိုက်ပါ - နောက် Video player ပေါ်မှာ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း Right click ပေးပြီး "Copy video URL at current time" ကို click ပေးလိုက်ပါ - ( ဒါဆို “time” parameter ထည့်သွင်းပါဝင်ပြီးသား မုန်းလို့မရအောင် ချစ်သွားပြီး ကနေ စမယ့် Video clip ရဲ့ URL ကို Copy လုပ်ပြီးသွားတာနဲ့ တူတူပါပဲ )
နောက် ကိုယ်ကြည့်စေချင်တဲ့ သူကို Mail ကနေ ဖြစ်ဖြစ် - Messenger box ကနေ ဖြစ်ဖြစ် URL ကို Paste လုပ်ပေးလိုက်ပြီး ကြည့်ခိုင်းလိုက်ပါ -
ဒါဆို တစ်ဖက်လူက ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ URL ကို နှိပ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကြည့်စေချင်တဲ့ Video clip ကို ရောက်ယုံတင်မက ကိုယ်ကြည့်စေချင်တဲ့ အပိုင်းကနေပါ စတင်ကြည့်ရှုလို့ ရပါလိမ့်မယ်။ အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ URL ကို စမ်းဖွင့်ကြည့်ပြီး စစ်ဆေးကြည့်ပါ - မူရင်း သီချင်း စဖွင့်တဲ့ နေရာနဲ့ ကွာခြားသွားပြီး မုန်းလို့မရအောင် ချစ်သွားပြီး ကနေ စတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခုရှိတာက YouTube က Video clip တွေကို တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ဆီ မျှဝေတဲ့ နေရာမှာ စချင်တဲ့ နေရာကနေ စခိုင်းလို့ ရပေမယ့် - ဆုံးချင်တဲ့ နေရာမှာ ဆုံးခိုင်းလို့ ရနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတော့ လတ်တလောမှာ မရှိသေးပါဘူး - နောက်ပိုင်းတော့ ရကောင်း ရလာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ကျွန်တော် ကြိုက်တဲ့ ချမ်းချမ်း သီချင်းလေး - သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ - ဒါပေမယ့် အားပေးသွားကြပါဦး -
Last edited by KznT; 06-03-2011 at 02:13 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 30 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဦး, ဆန်းမောင်, တီဘွား, နီထွန်းဦး, ရဲထွတ်, ဇော်ရဲပိုင်, ဇော်လေးထွန်း, တောင်ကြီးသားလေး..., မောင်ကို, မောင်သံသရာ, ငြိမ်းချမ်း, ဖြိုးလေး, aungphyo, bonge, emo.loverlay, goldstar, hellboy, july20, ko myo, kyawswarl, lu soe, Lwin Thu, minthike, minthumon, moonson, openeyes, phyomyintthein, thureinsoe, tu tu, zo
15-02-2011, 03:04 AM
ကျွန်တော်လည်း ဘာဘူကြီးနဲ့ လျှာ အထူကြီးလုပ်ပီးတော့ နေခဲ့တာကြာပါပီ ကြာပီးတော့လည်း ပို့စ်က မတက်နိင်ဘူး သိချင်တာလေး တခုကို လိုက်လုပ်လိုက် နောက်ထပ် သိချင်လာလိုက်နဲ့ပဲ့ ဘာဘူကြီးနဲ့ ကုလားကြီး ပေါင်းနေတာနဲ့ နောက်ဆုံး ဒီစာရေးဖို့ ကို အားပြန်ယူနေတာနဲ့ ပဲ့ ကုလားမကြီးနဲ့ ညားတော့မလို ဖြစ်နေပီ..
ကဲ့ ထားပါတော့ မရောင်ရာဆီလူးနေတာနဲံ ပဲ့ မရောက်တော့ဘူး ရှေ့ကို ကျွန်တော် ဒီနေ့ တင်ပြဆွေးနွေးမယ် အကြောင်းအရာလေးကတော့ ဖြည့်ဆွက် ချက်တခုလိုပါပဲ့ အပေါ်မှာ ကိုကေဇတ်ပြောသွားတာ အကုန်လုံးနီးပါ ပြီးပြည့်စုံနေသလောက် ဖြစ်နေပါပီ ဒါပေ့မယ်။ Youtube Video editor အကြောင်းလေး မပါလို့ ကျွန်တော် ထပ်ထည့်ဆွေးနွေးသွားချင်ပါတယ် ကျွန်တော် တော်ယုံလည်း ဒီ editor ကို သုံးတာမတွေ့ ကြရသေးပါဘူး ဒါပေ့မယ် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ သုံးပုံလေး နဲ့နဲ့ကိုထောက်ပြပြောပြကြည့်ပါမယ် အကိုအစ်မများ ……ပြီးပြည့်စုံလောက်အောင်တော့ မပြင်ဆင်ရသေးပေ့မယ် အကိုအစ်မများသိဖို့ လောက်ကိုပဲ့ အဓိကထား ရေးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီလင့်လေးကနေပီးတော့ http://www.youtube.com/ ကျွန်တော်တို့ Youtube ကို ၀င်လိုက်ပါ Gmail အကောင့် ရှိရင်ကို log in ၀င်လို့ ရပါတယ် ပထမဆုံး မိမိ ဖြတ်ညှပ် ကပ်လုပ်ချင်တဲ့ ဖိုင် တွေ ကို အရင်ဆုံး youtube မှာ upload တင်ထားလိုက်ပါမယ်။. ကျွန်တော် ဥပမာ လုပ်ပြထားတာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါ ပထမဆုံး ကျွန်တော် ဖြတ်ချင် ပြန်ဆက်ချင်တဲ့ video ဖိုင် ၂ ခုကို upload တင်ထားလိုက်ပါတယ်။7file ထိ ဖြတ်ညှပ် ကပ်လုပ်ပီးတော့ ပြန်ဆက်ခွင့်ပေးထားပါတယ် ။။
အောက်က ပုံလေးကို ကြည့်လိုက်ပါ….. ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ Youtube ကို ဒီလင့်ကနေ ၀င်လိုက်ပါ…
၀င်ပီးရင်ကျွန်တော်တို့ My video ကို ရွေးလိုက်ပါ အောက်က ပုံလေးလို ကြည့်ပါဦး ကျွန်တော်ပြထားပါတယ်…
ကဲ့ ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့ တိုင်း ကျွန်တော် upload တင်ထားတဲ့ ဖိုင် ၂ ဖိုင်ကို စတွေပါပီ ကျွန်တော် တို့ ဘယ်လိုတွေ effect တွေ ပါတယ် ဘာတွေ ပါတယ်ဆိုတာကို ပြပါ့မယ် အများကြီးမဟုတ်ပေ့မယ် သုံးလို့တော့ ရပါတယ်…ဖြတ်လို့ ရပါမယ်. Effect ရိုးရိုးလေးတွေ ပါပါတယ်. နိင်ငံခြား Mp3 sound တွေ ပါပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကတော့ လုံးဝကြီး ပြီးပြည့်စုံနေတာမဟုတ်သေးပေ့မယ် အလွယ် တကူ ဖြတ်ညှပ်လို့ ရတယ်လို့ ပြောချင်တာပါ..မိမိလိုချင်တဲ့ video ဖိုင် တခုတည်းကို တကန့်ချင်းဆီ လုပ်ယူသွားလို့ ရပါတယ် ဖြတ်တဲ့ အပိုင်းလေး နဲနဲ ကို ကျွန်တော် ပြောပြချင်ပါသေးတယ် …
ပထမ အဆင့်အနေနဲ့ ကျွန်တော်ဖြတ်ညှပ်လုပ်ချင်လို့ upload တင်ထားတဲ့ file ကို အရင်ဆုံး ဖိုင်ကိုထောက်ပီးတော့ အောက်က video edit ထဲ့ကို ဆွဲထည့်လိုက်ပါ. နောက်ပုံကို ထောက်ကြည့်လိုက်ရင် အောက်က ပုံလေးတိုင် မြင်နေရပါပီ ကြည့်လိုက်ပါဦး..
ကပ်ကြေးပုံလေးကိုထောက်ပီးတော့ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်သလို ဖြတ်ညှပ်လုပ်လို့ ရပါပီ ကပ်ကြေးလေးကို နိပ်လိုက်ရင် စပီး ဖြတ်ဖို့တွက် ကျွန်တော်တို့ အောက်ကတိုင်းလေး ပေါ်လာပါပီ လိုချင် ဖြတ်ချင် အစ အဆုံးကို သတ်မှတ်ပီးတော့ ကပ်ကြေးပုံလေးလေးကို နိပ်ပီးရင် Save ကိုနိပ်လိုက်ယုံပါပဲ့ ခင်ဗျာ…
မိမိလိုချင်သလောက်လေး Save ပီးပီ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဘေးညာဘက်ချမ်းက video ဖိုင်လေးကို ကိုယ်ဖြတ်ထားသလောက်လေး ကြည့်လို့ လည်း ရပါတယ် .ဒီဖြတ်ထားတဲ့ ဖိုင်လေးကို ကျေနပ်လို့ ဒေါင်းချင်တယ်ဆိုရင် IDM တင်ထားရင် IDM ကနေ တခါတည်းဒေါင်းယူလို့ ရသလို နောက် effect တွေ့ ထည့်ပီးတော့မှ နောက်ဆုံးမှ ဒေါင်းမယ် ဆိုလည်း ရပါသေးတယ် … ဒါမှ မဟုတ် Black and White လုပ်လို့ ရပါသေးတယ် ။ Rotate လှည့်ပီး လိုချင်သလို လုပ်လို့လည်းရပါသေးတယ်။
လုပ်လို့ မရတာတော့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ထားတာကို youtube မှာ တခါတည် public လုပ်လို့ မရတာပါပဲ့ ဒါလေးကိုတော့ သဘော မတွေမိဖြစ်ရပါတယ်။လုပ်လို့ ရတာတွေ ကို ဆက်ဆက်ပီးတော့ Edit လုပ်ချင်သူများ အတွက် ဆက်ဆက် လေ့လာရင်းပျော်ရွှင်နိင်ကြပါစေလို့.. ဆုတောင်းရင်း
အောက်ပါအသင်းဝင် 23 ဦးတို့မှ သန့်ဇင်ဌေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, ဆန်းမောင်, နီထွန်းဦး, ဝင်းအောင်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, ငြိမ်းချမ်း, arkaraung, aungphyo, AZM, bagothar85, bonge, emo.loverlay, g00gle, goldstar, kyawswarl, KznT, Lwin Thu, minthike, minthumon, thureinsoe, tu tu, zo
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Feb 2010
ပို့စ်7ခုအတွက် 60 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
youtube မှာ upload တင်တဲ့ အကြောင်းလေးပါတင်ပေးပါဦး ။ ဖိုင်လ် တင်တဲ့အခါ ဇာတ်ကားတခုလုံးကို တဆက်တည်းကြည့်လို့ ၇အောင်ဘယ်လို တင်လို့ ရလဲ အမြန်ဆုံးဘယ်လိုတင်လို့ ၇သလဲပါသိချင်ပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ အောင်လင်းနိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, ငြိမ်းချမ်း, kyawswarl, zo
Find More Posts by အောင်လင်းနိုင်
ပို့စ်4ခုအတွက် 10 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
youtube မဒေါင်းတတ်လို.ပါ .... ကူညီကြပါဦး အွန်လိုင်းကတို့ရဲ့ ။ ဖွင့်လိုက်ရင်
an error occurred. Please try again later လို့ ဘဲ ပေါ်နေပါတယ်ဂျ .....။
ကိုကိုတို့ မမတို့ ရေ ..... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ မင်းပြည့်စုံ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, zo
Find More Posts by မင်းပြည့်စုံ
Originally Posted by မင်းပြည့်စုံ
youtube မဒေါင်းတတ်လို.ပါ .... ကူညီကြပါဦး အွန်လိုင်းကတို့ရဲ့ ။ ဖွင့်လိုက်ရင်
Youtube မှာ Error တက်တာက ကော်နက်ရှင်ကြောင့်ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်.. တခါတလေကျယင် ကျွန်တော်လည်း အဲလိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်.. Youtube ကနေ ဒေါင်းလုဒ်ဖို့ကိုတော့ အပေါ်က ပိုစ့်လေးတွေကို သေချာဖတ်ကြည့်လိုက်ယင် သိနိုင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်တော့ Internet Download Manager ဆိုတာလေးကို သုံးပြီးဒေါင်းပါတယ်.. တကယ်လို့ Error တက်တာတောင်မှာ အဲ့ဒါနဲ့ဆို ဒေါင်းလို့ရပါတယ်... ဒီပိုစ့်မှာ အစ်ကိုကေဇက် ရှင်းပြထားတာ ရှိပါတယ်.. IDM ကို လိုချင်ယင်တော့ ဒီနေရာမှာ သွားရောက်ဒေါင်းလုဒ်နိုင်ပါတယ်... Youtube က သီချင်းတွေကို Mp3 တို့၊ Mp4 တို့ ပြောင်းချင်ယင်တော့ http://www.online-convert.com/ ဆိုတဲ့ ဆိုက်လေးကို ကျွန်တော် သဘောကျပါတယ်.. အဲဒီမှာဆို ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ Format ကို နှိပ်ပြီး Youtube က လင့်ကို ကော်ပီလုပ်ပြီး Enter Url နေရာမှာထည့် ၊ ပြီးယင် Optional Settings မှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဟာတွေပြောင်းပြီး Convert file ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ယင် သူ့ဘာသူ Convert လုပ်နေပြီး ၊ ပြီးသွားယင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့ လင့်လေးကိုနှိပ်ပြီး ဒေါင်းယုံပါပဲ။ အဲဒီဆိုက်မှာ တခြား File Types တော်တော်များများကိုလည်း Convert လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်.. အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ...
အောက်ပါအသင်းဝင် 18 ဦးတို့မှ bagothar85 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, မင်းပြည့်စုံ, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, ငြိမ်းချမ်း, arkaraung, aungphyo, AZM, g00gle, kyawswarl, KznT, Lwin Thu, minthumon, moonson, phoetharlay, wunna313, zo
ကိုပဲခူးသားလည်း ပြောပြထားပီးပီ။ ကျွန်တော်နဲ့နဲလေး ဖြည့်ပြောပြချင်လို့ ဒီနေရာမှာ ဆက်ရေးဖြစ်တာပါ။ တကယ်လို့ IDM ကို သုံးရတာ အဆင်မပြေဘူး။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရတာ မပေါ်ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Realplayer ကို ပြောင်းသုံးပါ။ သူ့မှာတော့ အားသာချက်က IDM ထက် ပိုတဲ့ အားသာချက်တခုရှိတယ် အဲ့တာက ကျန်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ တချို့ Youtube မဟုတ်တဲ့ တခြား Video ဆိုဒ်တွေမှာ ကြည့်ရင် IDM မပေါ်ချင် မပေါ်ပါဘူး။ Realplayer မှာတော့ ကိုယ်ကြည့်တဲ့ ဆိုဒ်က Video Format တိုင်းကို ဒေါင်းလုပ်ချဖို့ Replayer downloader ပေါ်ပါတယ်။ ဒါက ဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့ ပထမ ညွှန်းချင်တဲ့ အချက်။ နောက်တခုက Youtube ကနေ ဒီ ဆော့ဝဲတွေ တင်မသုံးချင်ဘူးဆိုရင် Mozilla သုံးတာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Add on နဲ့ အသုံးပြုကြည့်ပါ။
ဒီတခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ ကိုမင်းပြည့်စုံက Youtube မှာ အကောင့်ဖောက်ပီးလည်း အသုံးပြုတယ်ဆိုရင် Youtube ကနေ မိမိ အကောင့်
Setting >>>> Playback setup >> I haveaslow connection. Never play higher-quality video
ကို ပြန်ပြောင်းရွေးပီး သုံးကြည့်ပါ။ ဒါကိုမှ မရသေးဘူး ပေါ်နေသေးတယ်ဆိုရင် Proxy သုံးဖို့ ညွှန်းလိုပါတယ်။ Proxy ကျော်ဖို့တွက် ဆော့ဝဲတွေကိုတော့ ဒီနေရာမှာ တခါတင်ပေးဘူးပါတယ်။ ဒါကိုမှ ဒီလိုပဲ့ Error ထက်တက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သူ့မူရင်းတင်ထားတဲ့ ဖိုင်ကို မရှိတော့လို့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံး တခုကတော့ ကိုကျော်ဇင်သန့် ဆွေးနွေးထားတာတွေကို သေသေချာချာ ဖတ်ကြည့်ပေးပါ။ အဆင်ပြေပါစေ ကိုမင်းပြည့်စုံ …..
အောက်ပါအသင်းဝင် 17 ဦးတို့မှ သန့်ဇင်ဌေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, တာတာ, နီထွန်းဦး, မင်းပြည့်စုံ, ဇေကြီး, မောင်သံသရာ, ငြိမ်းချမ်း, arkaraung, aungphyo, AZM, bagothar85, g00gle, KznT, Lwin Thu, minthumon, moonson, zo
button လေးတွေနဲ့ တင်ရင် button မပေါ်လို့ဗျ
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ နင်းကန် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, သန့်ဇင်ဌေး, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မောင်သံသရာ, zo
Find More Posts by နင်းကန်
20-12-2011, 12:50 AM
(တင်ထားပြီးသားရှိရင် ခွင့်လွတ်ပါ။) Youtube ကနေ လိုချင်တဲ့ Video file တွေကို Download လုပ်ဖို့ အတွက် ကိုညီနေမင်း(နည်းပညာ) ရေးထားဒါလေး ဒီနေရာ မှာဖတ်ဖူးပါတယ်။ Program လေးနာမည်က You TubeGet.5.9.7 ပါ။ Keyfile လည်းပါပါတယ်။ ကျွန်တော် ဖေါ်ပြထားတဲ့ နေရာမှာပါတဲ့ Link ကနေ ဒေါင်းလို့ ရသလို။ ifile အတွက် ဒီနေရာသွားပြီး ဒေါင်းကြည့်ပါ။ ( Download Link မညွှန်းတတ်သေးလို့ အဆင်မပြေမှာ စိုးလို့ပါ။) အသုံးပြုနည်းလေးကလည်း လွယ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ဒေါင်းလို့ရတဲ့ zip file ကိုဖြီလိုက်ပါ။
ရလာတဲ့ Folder ထဲမှာ file (2) ဖိုင် နဲ့ Folder (1) ခုပါပါမယ်။
အဲဒီထဲက yg.exe ဆိုတဲ့ အစိမ်းရောင်ဖိုင်လေးကို Double Click လုပ်ပြီး Install လုပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Program ကို Run ပေးပါလိမ့်မယ်။
Program windows ရဲ့ အောက်နားက Buy Now ကို Click နှိပ်လိုက်ပါ။ key ထည့်ရမဲ့ Box လေးတစ်ခု ပွင့် လာပါလိမ့်မယ်။
ခုနက zip file ဖြီထားတဲ့ Folder ကိုပြန်ဖွင့်ပြီး Keygen Folder ကိုထပ်ဖွင့်ပါ။ အဲဒီထဲက keygen.exe ကို Double Click ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ။
Box လေးတစ်ခုပွင့်လာပါမယ်။ Serial ဆိုတာလေးရဲ့ ဘေးနားက Do It ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ရင် ကွက်လပ်လေးထဲမှာ Key ကိုတွေ့ရပါမယ်။ အဲဒီ Key ကို Copy ယူလာပြီး Program ရဲ့ Key ထည့်ရမဲ့ Box လေးထဲမှာ ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ Register ကိုနှိပ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေပါပြီ။
ပြီးမှ ကိုယ်ဒေါင်းချင်တဲ့ YouTube Video ရှိတဲ့ Link ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Browser ရဲ့ Address Box ထဲမှာတွေ့တဲ့ (URL)စာသားတွေအားလုံးကို Copy ကူးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် ခုနက You TubeGet Program မှာပါတဲ့ အစိမ်းရောင် + ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Add New Download windows လေးပွင့်လာပါမယ်။
အဲဒီ windows ရဲ့ အပေါ်ဆုံးမှာပါတဲ့ Copy and Paste Video URL Here ဆိုတဲ့ ကွက်လပ်လေးမှာ ခုနက ကူးယူလာတဲ့ URL စာသားတွေကို Paste လုပ်လိုက်ပါ။
ကျန်တဲ့ Setting တွေနဲ့ ဖိုင်သိမ်းမဲ့ နေရာတွေကိုတော့ ကိုယ်ကြိုက်သလိုပြောင်းလို့ ရပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ အောက်ဆုံးက အစိမ်းရောင်မြားပုံးလေးပါတဲ့ Download ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
နာက်ထပ် Video file တွေကိုလည်း ဒီအတိုင်း ဆက်ပြီး လုပ်သွားလို့ ရပါတယ်။ နောက်ဆိုရင် URL ကို Copy ယူလိုက်တာ နဲ့ Program မှာထည့်ပေးပြိးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Video တွေအတွက် Converter လည်းတစ်ပါတည်းပါပါတယ်။
Video တွေကို Download ပေးထားပြီးတော့ Gtk,FB,....... တွေမှာကျူနေနိုင်သလို မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်မှာရှိတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာပေတွေဝင်ရောက် ဖတ်ရှုနေလို့လည်း ရပါတယ်။
အားလုံး အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ ....။
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ ဇာနည်စိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, ဆွိ, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်သံသရာ, aungphyo, bagothar85, g00gle, putty, tu tu, zo
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Apr 2010
ပို့စ်2ခုအတွက်4ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်က တော့ဒီလိုသုံးပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပထမဦးဆုံး jre-6u25-windows-i586 ကို download ချတယ်။ ပြီးတော့ install လုပ်ပါတယ်။ mozilla ဖွင့် youtube မှာ video ရှာတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ကားကိုဖွင့်ကြည့်တယ်။ ကားပွင့်လာရင် အပေါ်က adress bar မှာ youtube ကိုဖျက်။ voobys လို့အစားသွင်းပါတယ်။ run ဆိုပြီး box ကျလာရင် run ပေးလိုက်ပါ။ download အောက်မှာ flv လား၊ mp4 လား၊ ဖိုင်ဆိုဒ် 320,480 စသည်ဖြင့်တွေ့လိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ဆိုရင် ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီးဆုံးကို တစ်ချက်နှိပ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် download ကျပါလိမ့်မယ်။ download ကျရင် internet Portable download manager နဲ့ဆွဲပါတယ်။ အလွန်မြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောတာ သဘောတရားပါ။ တစ်ကယ်လုပ်ရင် နဲနဲတော့ကွာပါလိမ့်မည်။ jre ကို မသွင်းထားရင် adress bar မှာ voobys လို့ပြောင်းရိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် download အောက်မှာ mp4,3gp,flv စသည်ဖြင့် ကျလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက် download manager ကိုတင်လိုက်ရင် firefox မှာ youtube ကို တိုက်ရိုက် download ချလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ် ဆိုဒ်ရွေးလို့မရပါဘူး။ပြန်ကြည့်ရင်ကောင်းတာကောင်းပြီး ၀ါးတာဝါးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောတာ အမှားပါရင် ညီနောင်များနေနှင့် နားလည်ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်။ ပြင်ပေးစေလိုပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ yarzarminnhtut အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ဇေကြီး, g00gle
Find More Posts by yarzarminnhtut
firefox addon ကအဆင်ပြေတယ်အကိုရေ
download box ထဲကနေစက်ထဲကိုဘယ်လို saveရမလဲပြောပေးပါနော်
Idm နဲ့ flv ဖိုင်ကိုဒေါင်းချင်တယ်..
www.youtube.com က တရားတော်များဖိုင်တွေဒေါင်းလိုက်တိုင်း flv နဲ့မကျဘဲ..
flv ဖိုင်နဲ့ ဒေါင်းလို့ရအောင်..အဲဒီwebm ဖိုင်ပုံစံနဲ့မလာတော့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ..
flv နဲ့ ဒေါင်းရမဲ့ နည်းတော့ လိုက်ရှာကြည့်တာ မတွေ့မိဘူး.. ကျွန်တော်မသိပါ..
ဒါပေမယ် youtube မှာ တင်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေအားလုံး webm format အကုန်ပြောင်းပြစ်တယ်လို့တော့ တွေ့ရတယ်
webm နဲ့ ဖိုင်ဖွင့်ကိုပဲ ကြိုးစားကြည့်ပါလား... နောက်ဆိုလည်း ဒီဖိုင်တိုက်နဲ့ပဲ စခန်းသွားရတော့မှာလေ..
်တကယ်လို့ ဖိုင်တွေ သိမ်းလို့ မော်ဇီလာ နဲ့ပေါ်နေတာ စိတ်မချမ်းသာရင် open with ကနေ player တစ်ခုခုနဲ့ ပြောင်းပြီးသာ ဖွင့်လိုက်ပါ..
ရှာလို့တွေ့ရင်တော့ ဒီမှာ လာရေးထားပေးပါ့မယ်...အခုတော့ မသိသေးပါ..........
တကယ်လို့ youtube ကနေ ဖွင့်ရတာ ဘရောက်ဇာနဲ့ အဆင်မပြေရင် html5 နဲ့ join ဖို့ လင့်ရှိတယ်ပါ...ကလစ်လိုက်ရုံပဲ
တစ်ခြားသိချင်တာရှိရင်တော့ ဒီမှာလည်း ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ဇော်ရဲပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
bagothar85, maJunior, tu tu
youtube မှာ flv သို့ MP4 နဲ့ဒေါင်းရအောင်
youtube site မှာ..ဖိုင်တော်တေိာများများကို WEBM ဖိုင်အဖြစ်သာဒေါင်းခွင့်ပြုနေပါတယ်..
တကယ်လို့မိမိဒေါင်းသောဖိုင်ကို Ipad ထဲကိုပြန်ထည့်တော့မယ်ဆိုရင်တော့.
Flv သို့မဟုတ်..DAT သို့မဟုတ်MP4 ဖြစ်ဖို့လိုပါပြီ.
တချို့ Conventer များကလဲ weBM ဖိုင်ကိုဖြတ်မပေးပါဘူးး
အဲလိုအဖြစ်မျိုးကြုံတွေ့ရပြီးခေါင်းနည်းနည်းနောက်မိလို့..မိသားစုကသူငယ်ချင်းများကိုအကူအညီတောင်း မိပါသေးတယ်..ခုတော့ အဆင်ပြေတာလေးတစ်ခုတွေ့မိလို့ဒေါင်းလိုက်ပါတယ်..
Install လုပ်ပီးရင် mozilla ကို restart ချပါ..
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ maJunior အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကျော်တိုး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်ပေါ်ဦး, azp09, g00gle, tu tu, yawnathan, zo
15-05-2012, 02:24 PM
ပို့စ် 15 ခုအတွက် 24 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
[SOLVED] youtube downloader in one section
ဘယ်မှာ ရေးရမလဲမသိလို့ ဒီမှာပဲ အကူအညီတောင်းလိုက်တော့မယ်နော်. နေရာမှားရင်လည်း ရွေ့ပေးပါ.. youtube က video တွေကို download လုပ်ချင်လို့ပါ... IDM ကော.. INT Video Downloader ကော နှစ်မျိုးလုံးရှိပါတယ်။ သူတို့နဲ့ဒေါင်းရင် အပိုင်းလေးတွေ အများကြီးဖြစ်နေလို့။။။။ youtube video က မိနစ်(၃၀)ကြာတယ်ဆိုရင် အဲဒါကို မိနစ်(၃၀) one file ထဲဖြစ်အောင် ဘာနဲ့ ဒေါင်းရင် ရနိုင်မလဲ ကျေးဇူးပြုပြိး ပြောပေးကြပါဦးရှင်.. ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ decemberdec အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by decemberdec
15-05-2012, 05:50 PM
ပြန်စာ - youtube downloader in one section
Originally Posted by decemberdec
ဘယ်မှာ ရေးရမလဲမသိလို့ ဒီမှာပဲ အကူအညီတောင်းလိုက်တော့မယ်နော်. နေရာမှားရင်လည်း ရွေ့ပေးပါ.. youtube က video တွေကို download လုပ်ချင်လို့ပါ... IDM ကော.. INT Video Downloader ကော နှစ်မျိုးလုံးရှိပါတယ်။ သူတို့နဲ့ဒေါင်းရင် အပိုင်းလေးတွေ အများကြီးဖြစ်နေလို့။။။။ youtube video က မိနစ်(၃၀)ကြာတယ်ဆိုရင် အဲဒါကို မိနစ်(၃၀) one file ထဲဖြစ်အောင် ဘာနဲ့ ဒေါင်းရင် ရနိုင်မလဲ ကျေးဇူးပြုပြိး ပြောပေးကြပါဦးရှင်.. ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
Youtube File Hack ဆိုတာကို သုံးကြည့်လိုက်ပါ အစ်မ။ အဲဒီဟာက ဖိုင်ဆိုဒ်လည်း သေးပါတယ်။ Install လုပ်စရာလည်း မလိုပါဘူး။ ဒီနေရာကနေ သွားရောက် Download နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ Youtube File Hack ကိုဖွင့်ထားပြီး Download ချင်တဲ့ Youtube Link ကို Copy လုပ်လိုက်တာနဲ့ သူ့အလိုလိုသိပြီး Address အကွက်ထဲမှာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပေါ်လာယင် ဘေးနားက Get ဆိုတဲ့ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ အောက်ဖက်မှာ File types အလိုက်၊ Quality အလိုက် Download လို့ရနိုင်တဲ့ လင့်တွေ ပေါ်လာပါမယ်။ အဲဒီအခါမှာ ကိုယ်နှစ်သက်ရာကို Right Click >> Download with IDM နဲ့ Download လို့ရပါပြီခင်ဗျာ...အဆင်ပြေပါစေအစ်မ...
Last edited by bagothar85; 15-05-2012 at 05:52 PM..
သန့်ဇင်ဌေး, ဇော်ရဲပိုင်, g00gle, maJunior, tu tu, zo
ဟုတ်ကဲ့ ။ youtube file hack နဲ့ အဆင်ပြေသွားပါပြီ။ အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ decemberdec အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပို့စ် 16 ခုအတွက် 17 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
youtube က နေ Download ဆွဲချင်လို့ပါ....
youtube က Download မပေးလို့ပါ..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ နေမင်းစိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by နေမင်းစိုး
အကိုရေ youtube ကနေ ဒေါင်းလော့ချချင်ရင် IDM ကိုသုံးပြီး ချလို့ရပါတယ် < ဖော်ပြပါ လင့်လေးမှာ ကြည့်လို့၇ပါတယ်ခင်ဗျာ
နောက်တစ်ခုက ကျနော် ဒီနေရာလေးမှာ တင်ပေးထားတဲ့ Add on နည်းလေး သုံးပြီးတော့လဲ ချလို့၇ပါတယ် အဆင်ပြေပါစေ
အောင်ဗလ, g00gle, goldstar, tu tu, zo
ကိုယ့်လူပြောတဲ့ Youtube File Hack ဆိုတဲ့ လင့်ကလဲ Error ပြနေတယ်၊ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲခိုင်းတဲ့လင့်ကတော့ ပွင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါင်းလုပ်ကို ကလစ်တဲ့အခါမှာ Error ပဲ ပြနေတယ်။ အားလုံးကို လိုက်ပိတ်ထားတဲ့ ပုံမျိုးပဲ။ ကြိုးစားကြည့်ပါဦးမယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ lokasara အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
firefox version.12 to 15 upgrade လုပ်လိုက် တာ youtube vedio တွေ ဖွင့်လို့မရတော့ လို့ ကျေးဇူးပြု ပြီး ကူညီကြ ပါ ခင်ဗျာ။
moe cho ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by moe cho
်flash player က update မဖြစ်လို့ နေပါလိမ့်မယ်...http://www.mediafire.com/?dlllt195hzo8dtc
မြန်အောင်သား, g00gle, moe cho, tu tu
how to, internet, user guide, you tube
အားလုံးအတွက် Ubuntu ( Linux ) KznT Linux များ (သို့) Linux နှင့်ဆိုင်ရာများ 20 02-09-2012 07:18 PM
အင်တာနက်အတွင်း သီချင်း ရှာဖွေခြင်း KznT Internet နှင့်ဆိုင်ရာများ922-08-2011 10:11 AM
Improve your Learning Skills with Youtube Captions KznT အထွေထွေဗဟုသုတ015-10-2010 07:50 PM
Windows7အတွက် ပြောင်းလဲမှု7ရပ် KznT Windows နှင့်သက်ဆိုင်သော203-03-2010 05:33 PM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 02:37 AM